We Fight We Win. -- " More than Media ": အမေရိကန်သံရုံးတာဝန်ခံက သေတာ တသိန်းရှိတယ်လို့ အတည်ပြုပြီ။
အမေရိကန်သံရုံးတာဝန်ခံက သေတာ တသိန်းရှိတယ်လို့ အတည်ပြုပြီ။
မုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာ တသိန်းရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ သတင်းကို မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြလာနိင်တာကတော့ အမေရိကန် သံရုံးတာဝန်ခံ ရှာရီဗီလာရိုဆာက
"The information we are receiving indicates over 100,000 deaths," the U.S. Charge D'Affaires in Yangon, Shari Villarosa, said onaconference call. The U.S. figure is almost five times more than the 22,000 the Myanmar government has estimated. The U.S. estimate is based on data from an international non-governmental organization, Villarosa said without naming the group. She called the situation in Myanmar "more and more horrendous."
သတင်းအပြည့် စုံကို စီ အောက်ပါလင့်မှာကြည့်နိင်ပါတယ်။